Ha joojin qiimeynta koorsooyinka tababarka iyo kuwa cusub ee noloshaada | Ragga Stylish
Nolosha lafteedu waa waxbarasho sii socota. Tababarku waa inuu ahaadaa mid ka jira dhammaan falalka maalinteenna maanta.
Wax kastoo aad ka shaqeyso ama xirfad, tababarka joogtada ahi waa dariiqa markasta lagula socodsiiyo. Iyo in si ku filan loogu diyaar garoobo mustaqbalka iyo isbeddelada waaxyaha.
Xirfadaha tacliinta iyo khibradda xirfadeed kuma filna. Waxaan wajaheynaa suuq sii kordhaya oo tartan ah. Kaliya maahan raadinta alaabada iyo adeegyada cusub, falalka suuqgeynta internetka, iwm. Waxay ku saabsan tahay dhismaha raasumaalka aadanaha oo si isdabajoog ah dib loogu warshadeeyo, waana heerka ku habboon xagga xirfadaha farsamada, xirfadaha bulshada, iwm.
1 Waxtarka tababarka
1.1 Horumarinta xaaladaha shaqada
1.2 Waxsoosaarka oo kordhay iyo karti xirfadeed
1.3 Isku kalsooni shaqo fiican
Horumarinta xaaladaha shaqada
Kordhinta awoodaha farsamada iyada oo loo marayo ficilada tababarka, Waxay siisaa boos ka wanaagsan kan shaqaalaha. Waxaad lahaan doontaa booska bilowga ah ee ugu wanaagsan ee aad ku dhiirrigeliso naftaada shirkaddaada, aad ku gaarto shaqo aad loo aqoonsan yahay, iwm.
Safka qorista gacmaha aadanaha
Waxsoosaarka oo kordhay iyo karti xirfadeed
Tababbarka wanaagsan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad go'aannada si wax ku ool ah u gaarto. Waxaad sidoo kale xaq u yeelan doontaa xallinta khilaafaadka iyo heerarka wax soosaarka oo wanaagsan.
Isku kalsooni shaqo fiican
Tababbarka uu bixiyo tababbarku, waxaad yeelan doontaa ilo aad ku gaarto hadafyada aad naftaada u dejisay. Waxaad sidoo kale la kulmi kartaa caqabado cusub. Tababarku wuxuu bixiyaa aqoon iyo waliba xirfado bulsheed. Tani waa arrinta damqashada, dulqaadka, ballanqaadka, is-dhaliilidda, iwm. Waxaa la cadeeyay inuu jiro xiriir dhow oo udhaxeeya tababarka, waxbarashada iyo kor u qaadida isku kalsoonida.
Tababbarka joogtada ahi waa qodob aan marna la iloobi karin. Waa lagama maarmaan in laga feejignaado wararka qaybtaada oo aad naftaada ku tababarto xirfadaha lagama maarmaanka ah. Tan waxaad awoodi doontaa inaad ku hormarto xirfad ahaan waxayna kuu fududeyn doontaa helitaankaaga shaqo.
LXirfadleyda qarniga XNUMXaad way ogyihiin in dibloomaasiyadooda aysan ku filneyn inay ku sii nagaadaan dariiqa mowjadda. Tababbarka isdaba jooga ahi waa shay ka soo muuqan doona noloshaada shaqada. Rumayso ama ha rumaysan, barashadaadu waxay kuu oggolaaneysaa inaad hagaajiso kartidaada wax soo saar iyo hal-abuur.
Ilaha sawirka: Xarunta Tababarka Vallbona / Shuruudaha
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Muhiimadda tababbarku u leeyahay xirfaddaada xirfadeed
Lix koodh roobab ah oo aad xidhan karto si gebi ahaanba caadi ah